ကင်ဆာပျောက်တဲ့ ဂျုံမြက်နုအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကင်ဆာပျောက်တဲ့ ဂျုံမြက်နုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကင်ဆာပျောက်တဲ့ ဂျုံမြက်နုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Posted by khinmintatthu on Jun 20, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ကင်ဆာရောဂါတွေ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဂျုံမြက်နုဆေးပင် ဆိုပြီး သတင်းစာမျက်နှာ တွေပေါ်မှာ အခုတလော တော်တော်လေး တွေ့နေရပါတယ်။ လက်ရှိ ဒီဆေးဘက်ဝင် အပင်ကို ပြည်တွင်းမှာ ပထမဦးဆုံး စတင်ဖြန့်ချိတာ တစ်နှစ်လောက် ရှိသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ FAME ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကနေ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ခုခံတိုက်ဖျက်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့ FAME ရဲ့ မန်နေးဂျင်းဖြစ်သူ အင်္ဂလန်မှ Alternative Medicine (ခေတ်သစ်သဘာဝဆေးပညာ) ဘာသာရပ်နဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ ယူလာသူ ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်မှ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ပေးနေသလို ပြည်ပနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား စတဲ့ နိုင်ငံများကနေ ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်း လာကြတယ်လို့ FAME ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆေးဝါးတာဝန်ခံတစ်ဦးက မီဒီယာများသို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလောက်တောင် အစွမ်းထက်ကြောင်း နာမည်ရလာတဲ့ ဂျုံမြက်နုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မက်ဖန် ပရိသတ်များလည်း သေသေချာချာ သိရအောင် ဂျုံမြက်နုနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ တွေကို စုစည်း တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဂျုံမြက်နုဆိုတာ Triticum aestivum လို့ သိပ္ပံအမည်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားနေကျ ဂျုံပင်လေးတွေရဲ့ အစေ့ရွက်ကနေ ဖြစ်လာတဲ့ အပင်လောင်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျုံပင်လောင်းလေးတွေ ၈ ရက်သားကနေ ၁၀ ရက်သားအတွင်း ရိတ်သိမ်းမှသာ အရည်အသွေး အပြည့်ဝဆုံး ဂျုံမြက်နုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ဂျုံပင်တွေမှာတော့ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု အစွမ်းတွေ နည်းပါးသွားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဂျုံမြက်နုဟာ ကျွန်တော်တို့ အာရှမှာ မကြာသေးမီ ကမှ စားသုံးခြင်း အတန်ငယ် ရှိလာပေမယ့် အနောက်တိုင်း ဥရောပတိုက်မှာတော့ စိုက်ပျိုးရေးဓာတုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ချားလ်စ် အက်ဖ် ရှန်နာဘယ် (Charles F. Schnabel) (အသံထွက် လွဲလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါရန်) ရဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်တွေကြောင့် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များ ကတည်းက အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာ စတင် သုံးစွဲနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှန်နာဘယ်ဟာ စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ကာ ဂျုံမြက်နုရဲ့ အစွမ်းကို ကမ္ဘာက သိပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်အောင် အားထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရှန်နာဘယ်ဟာ ကြက်နာကျလို့ သေလုဆဲဆဲ ကြက်တွေကို ပြန်ကျန်းမာလာအောင် ဂျုံမြက်နုတစ်မျိုးတည်း သုံးပြီး ကုသပေးခြင်းဖြင့် ဂျုံမြက်နုရဲ့ ဆေးဖက်ဝင် အစွမ်းသတ္တိကို စတင်ဖော်ထုတ် လက်တွေ့ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလို ပြန်နေကောင်းလာတဲ့ ကြက်မတွေဟာ တခြား နေကောင်းတဲ့ ကြက်တွေထက်တောင် ဥဥနှုန်းတွေ သိသိသာသာ မြင့်မားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ သူလည်း အားတက်သွားပြီး ဂျုံမြက်နုတွေကို အခြောက်လှမ်း အမှုန့်ပြုကာ ကြက်တွေရဲ့ မွေးမြူရေး ဖြည့်စွက်အစာအဖြစ် ကိုယ်တိုင်လည်းကျွေး၊ ခြံနီးချင်းတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးပြီး စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကို မယုံနိုင်လောက်တဲ့ နှစ်ဆတိတိ နှုန်းနဲ့ ဥတွေ အထွက်တိုး လာတာကို တွေ့ရှိရပြီး နောက်ပိုင်း ရှန်နာဘယ်ဟာ ဓာတုဗေပညာရှင်များနဲ့ အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေဆီ သူ့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကို ကြော်ငြာကမ်းလှမ်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျုံမြက်နုရဲ့ အစွမ်းကို လက်တွေ့ သိရှိလာကြတဲ့ အခါမှာ Quaker Oats နဲ့ American Dairies Inc. တို့လို ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး နှစ်ခုကနေ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူသားတွေအတွက် ဂျုံမြက်နု ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ နောက်ထပ် သုတေသန ပြုနိုင်ရေးများအတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၄၀ အရောက်မှာ ရှန်နာဘယ်ရဲ့ ဂျုံမြက်နုအမှုန့် သံဘူးများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတွေ အနှံ့မှာ ရှိတဲ့ ဆေးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျုံမြက်နုကနေ ဖျော်ရည် ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက် ရှိပါတယ်။ တချို့ တိုင်းပြည် တွေမှာဆို ဂျုံမြက်နုကို အိမ်မှာ တနိုင်တပိုင် ဗန်းငယ်လေးနဲ့ စိုက်ပျိုးပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အရည်ညှစ်သောက်သုံးတဲ့ အလေ့အထတောင် ရှိကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျုံမြက်နုရဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးများ
(၁) အပင်တွေအားလုံးနီးပါး အစိမ်းရောင် ရှိနေရတာဟာ အပင်တို့ရဲ့ ဆဲလ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အစိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်း ကလိုရိုဖီး (chlorophyll) ဆိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကလိုရိုဖီးဟာ လူသားရဲ့ အသက်ရှည် ကျန်းမာရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည် (Wheatgrass Juice) ဟာ ကလိုရိုဖီးတွေရရှိနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အစားအသောက်ပင်ရင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၂) အလင်းကနေရတဲ့ သဘာဝစွမ်းအင် နဲ့ အောက်စီဂျင် ပါဝင်မှုမှာ ဂျုံမြက်နုက အမြင့်မားဆုံး အစားအသောက် တစ်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဂျုံမြက်နုမှာ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု အင်ဇိုင်း (Enzymes) ၈၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါတွေကို ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်သလို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၃)နေရောင်ခြည်ရဲ့ သဘာဝစွမ်းအားတွေ စုစည်းထားတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှု၊ အူ၊ သားအိမ်နဲ့ အဆုတ်များရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(၄) ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ အနာကျက်မြန်စေတဲ့ ဆေးအဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။
(၅) ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည်ဟာ သောက်ချလိုက်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ကြေပျက်သွားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
(၆) ဂျုံမြက်နုဟာ ကလိုရိုဖီး ကြွယ်ဝလို့ သွေးအားကို ပြန်ဖြည့်တင်းပေးနိုင် ပါတယ်။ သွေးနီဆဲလ်ပမာဏ အရမ်း ကျဆင်းလို့ သွေးအားနည်းရောဂါ (Anaemia) ရနေတဲ့ သူတွေကို ဂျုံမြက်နု ဖြည့်စွက် ကျွေးမွေးပေးရင် ၄ ရက် ၅ ရက် အတွင်းတောင် ပုံမှန်ပမာဏကို ပြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၇) မြုံနေတဲ့ နွားထီး နွားမတွေကို ပုံမှန်ကျွေးပေးရင် မြုံနေခြင်း ကနေတောင် ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မဂ္ဂနီစီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ ကလိုရိုဖီးဟာ မျိုးပွားဟော်မုန်းတွေကို ပုံမှန်ကောင်းမွန်စေတဲ့ အင်ဇိုင်း (Enzymes) တွေကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန္စာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒြပ်စင်များပြပုံ ဖြစ်ပါတယ်
(၈) ကလိုရိုဖီးဟာ အစ်ိမ်းရောင် အပင်တွေ အားလုံးမှာ ပါဝင်ပေမယ့် ဂျုံမြက်နုရဲ့ ကလိုရိုဖီးက သာလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သြဂဲနစ်နည်းပညာနဲ့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ မြေဆီလွှာထဲမှာ ရှိတဲ့ သတ္တုဓာတ် ၁၀၂ မျိုးထဲ ၉၂ မျိုးအထိ စုပ်ယူနိုင်တဲ့ အတွက် သူ့အထဲမှာ လူသားတွေ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဒြပ်စင် ၁၀၀ ကျော်အထိ ပါဝင်နေတာကို ထူးခြားအံ့သြဖွယ် တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၉) ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်သျှူးတွေကို အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
(၁၀) ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာ မုန်လာဥ၀ါဖျော်ရည် အပါအ၀င် အခြားသော သစ်သီးဝလံဖျော်ရည်တွေ ထက်တောင် ပိုအစွမ်းထက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျုံမြက်နု တစ်ပေါင်ခွဲ စားရင် မုန်လာဥ၀ါ၊ ဆလတ်ရွက်၊ တရုတ်နံနံပင် စတဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၃၅ ပေါင်စားတာနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၁၁) ဆေးဝါးတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စုပုံခြင်းကို ဖယ်ရှားထုတ်ပစ် နိုင်လို့ ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို နည်းစေပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျက်ပြယ်စေပါတယ်။ အသည်းသန့်စင်စေလို့ အသည်းရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေ ပုံမှန်မှီဝဲသွားရင် သွေးတွင်းသကြားပမာဏ (blood sugar level) ကို ပိုမို ထိန်းသိမ်းနိုင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
(၁၂) အလှအပ ဖက်ဆိုင်ရာကနေ ကြည့်ရင် ဂျုံမြက်နု ဖျော်ရည်ဟာ ၀က်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး အမာရွတ်တွေကိုလည်း ပျောက်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့နဲ့ ကိုယ်နံ့မကောင်းခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းစေပြီး တစ်နေ့ နည်းနည်း စားသုံးသွားရုံနဲ့ သွားများကို ခိုင်မာစေကြောင်း တွေ့ရှိထားရပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူလည်း နှေးစေပါသတဲ့။ ခုခံအားစနစ် ပျက်ယွင်းလို့ ဖြစ်ရတဲ့ နှင်းခူနဲ့ လေးဖက်နာရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့လည်း သက်သာစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
(၁၃) ဂျုံမြက်နုဖျော်ရည်ကို ခံတွင်းမှာ ၅ မိနစ် ငုံထားရင် သွားကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေပြီး ခံတွင်းထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ သွားဖုံးပြည်ယိုနာ ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၄) မဂ္ဂနီစီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ ၀မ်းချုပ်သူတွေအတွက်လည်း ဘေးဥပဒ်မရှိတဲ့ သဘာဝ ဆေးကောင်းတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းထားပေးနိုင် ပါတယ်။
(၁၆) ယနေ့ခေတ်ရဲ့ မြို့ပြလေထုထဲမှာ အနည်းနဲ့ အများ ဆိုသလို ပါဝင်နေတဲ့ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (Carbon Monoxide) ရဲ့ အဆိပ်အာနိသင်ကို အနည်းဆုံးအထိ လျှော့ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၁၇) ခဲ (Lead) ၊ စိန်ဖြူခေါ် အာဆင်းနစ် (Arsenic) ၊ ပြဒါး (Mercury) စတဲ့ အဆိပ်သတ္တုများကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
(၁၈) သာလစီးမီးယား (Thallasemia) ၊ ဟေမိုဖေးလေးယား (Haemophillia) စတဲ့ သွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါများ အားလုံးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၁၉) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းရည် (Antioxidant Property) ရှိတဲ့ ဂျုံမြက်နုဟာ ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အိုမင်းခြင်းကို အထူးနှေးကွေးစေ ပါတယ်။
လူတချို့မှာ ရှားရှားပါးပါး အနေနဲ့ ဂျုံမြက်နုနဲ့ မတည့်တဲ့ အတွက် စားသုံးလိုက်ရင်
(၁) ပျို့တက်ခြင်း (ဒီလိုမဖြစ်အောင် တခြားအစားအစာတွေနဲ့ ဝေးဝေး သုံးဆောင်သင့်ကြောင်း ပညာရှင်များ ညွှန်ကြားထားပါတယ်)
(၂) ခေါင်းကိုက်ခြင်း (ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်း အရမ်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာ မလိုပါဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်များကို ဂျုံမြက်နုက ဖယ်ရှားနေတဲ့ အတွက် ပျို့တက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေ ခဏလောက် ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလိုပဲ ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်)
(၃) ပထမဆုံးအကြိမ် စသောက်သောက်ချင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျွံ သောက်လိုက်မိရင်တော့ ၀မ်းလျှောတတ်ပါတယ်။
(၄) ဓာတ်မတည့်ခြင်း (အရေပြားမှာ အဖုအပိန့်များထွက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း စတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဂျုံမြက်နု ထုတ်လုပ်ရာမှာ မသန့်ဘဲ မှိုပါလာလို့ ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး)
လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ဂျုံမြက်နုကို FAME ကပဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် ရောင်းချနေပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ကျွဲနားထောက်ရွာနားမှာ ရှိတဲ့ FAME ရဲ့ Organic Farming Project ကနေပြီး တစ်ပြည်လုံးအတွက် ဖူလုံအောင် ထုတ်လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး မှာယူလာတဲ့ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား စတဲ့ နိုင်ငံများသို့လည်း ပို့ဆောင်ရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ FAME ရဲ့ တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောကြားပါတယ်။
ဂျုံမြက်နုဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ပုံကို ၄င်းက ဆက်လက် ရှင်းပြရာမှာ ဂျုံပင်များမှ မျိုးစေ့များရအောင် ၃ လခန့် စောင့်ပြီး ထုတ်ယူရကြောင်း၊ အဆိုပါ ဂျုံစေ့များမှ အပင်လောင်းလေးများ ရအောင် ဖောက်ကာ ပျိုးထောင်ပေးရကြောင်း၊ ရရှိလာတဲ့ ဂျုံမြက်နု ပင်လေးများကို ၈ရက်သားမှ ၁၀ ရက်သားအတွင်း ရိတ်သိမ်းအခြောက်လှမ်းကာ အစွမ်းထက်လှသော ဂျုံမြက်နုဆေးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Giant မှာ တွေ့နေတာတော့ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆေးဖက်ဝင်မှန်းမသိလို့ ကိုင်ပြီး မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီတစ်ခါသွားရင်ဝယ်ပြီး ဖျော်ရည်လုပ်သောက်မယ်။
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းပြထားတယ် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. နောက်နောင်လဲ ပို.စ်တွေတင်ပေးပါအုံး
ပြီးတော့ အဲဒီအပင်လေးတွေ အိမ်မှာစိုက်လို.ရလား ရရင် မျိုးစေ့ဘယ်မှာဝယ်ရလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ
အခု သောက်သုံး လိုပါ က မြန်မာပြည်တွင်း မည်သည့် နေရာ ၀ယ် ယူ နိုင် ပါသလဲ။
ဖျော်ရည် ready made အဖြစ် ရောင်းမှာ လား။
ကိုယ်တိုင် အပင် ဖောက်ပြီး သောက် သုံး လိုပါ လျှင် ပြုလုပ် ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို လည်း သိလို ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြင့် ခင်မင်တတ်သူ ပို့ စ် ကို စောင့်မျှော် အားပေးနေပါမည်။
အခုလို သတင်းကောင်းလေး တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
တကယ်လို့ ပြန်စိုက်ပျိုးလို့ရနိုင်တဲ့ ဂျုံစေ့လေးတွေဝယ်လို့ရနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်
ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာ သီးသန့်စိုက် ရေဖြန်းသင့်ဖြန်းပေး နေရောင်ပြ
ပေါက်လာရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖျော်သောက်
အရသာမကြိုက်ရင် သုတ်စားသင့် သုတ်စားနိုင်တာပေါ့ တွေးကြည့်တာပါ အချိုမှုံ့တော့မထည့်နဲ့ပေါ့
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတော်သဘောကျဦးမယ် …လုပ်စားစရာ ဖျော်ရည်တမျိုးထွက်ပြီလို့ … ။
အပေါ်က ဂျုံမြက်နုဆိုတာတော့… တီဗီကြော်ငြာတွေထဲ သတိမထားမိဘူး..။
ဂျပန်က.. အအိုးဂျိရုဆိုတာတော့ ကြော်ငြာထဲ.. ခဏခဏတွေ့တယ်..။ အဲဒီ၂ခု တူတူပဲလို့ထင်ပြီး လိုက်ဖတ်ကြည့်တာ ဟုတ်ဟန်တော့မတူဘူး..။
“Green drink” redirects here. Forasmoothie that is green, see Green smoothie.
Aojiru (青汁?) isaJapanese vegetable drink most commonly made from kale. The drink is also known as green drink or green juice in English,adirect translation of the Japanese meaning. (In modern Japanese, the character 青 ao means “blue”, but it is commonly still used in older contexts to refer to green vegetation.)
Aojiru was developed in October 1943 by Dr. Niro Endo (遠藤仁郎 Endō Nirō?), an army doctor who experimented with juices extracted from the discarded leaves of various vegetables in an attempt to supplement his family’s meager wartime diet. He credited the cure of his son from pneumonia and of his wife from nephritis to aojiru, and in 1949 concluded that kale was the best ingredient for his juice.
Aojiru was popularized in 1983 by Q’SAI (キューサイ?), who started marketing 100% kale aojiru in powdered form asadietary supplement, and sales boomed after 2000 when cosmetics giant Fancl started mass retailing of the juice. Today, many Japanese companies manufacture aojiru, usually using kale, young barley or komatsuna leaves as the base of the drink, and the size of the aojiru market was well over $500 million in 2005.
ဂျပန်က.. အအိုးဂျိရုနဲ့ပတ်သက်တာ ရှာပေးလိုက်ပါတယ်။
FAMEကဂျုံနု ကိုသုံးတာပေါ့။ ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်..အောက်ပါလင့်ခ်ကို…..။
Triticum aestivum ဆိုတာ ရိုးရိုး ပေါင်မုန့် ဂျုံ ပါဘဲ ။ဆန် မှာ ပေါ်ဆန်းမွှေး ငစိန် ငကျွဲ ဆိုသလို မျိုးကွဲတွေ ရှိသလို ဂျုံ မျိုးကွဲ တမျိုးပါ။ဂျုံမြက်နုဆိုပြီး နာမည်အခေါ်ထူးဆန်းပေမဲ့ ဂျုံ ပင်ပေါက် ပါဘဲ။ ဂျုံပင်ပေါက်မှာ အာဟာရဓါတ်တွေ အများအပြား ပါဝင်နေပါတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖက်မှာ ဂျုံပင်ပေါက်ကနေ ကပ်စေးနဲ(သကြားလုံးလုပ်တဲ့ အခြေခံ ကုန်ကြမ်း) ထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အဲသည် ကပ်စေးနဲ လုပ်ငန်းအကြောင်း သိသူများ တင်ပြပေးကြပါခင်ဗျား။
ဒီ မှာတခါ တလေဈေး မှာရောင်းတာ တွေ့ဖူးတယ် ။ မြက်ပင်လို ပဲ ။ စက်နဲ့ကျိတ် ပြီး ဖျော်ရည်ပါ လုပ် ရောင်း တယ် ။ ထိုင်ဝမ် သားတွေတော့ ဝယ်တာတွေ့တယ် ။ ဒီ အပင်(wheat grass) ရဲ့ပုံကိုလင့် ထဲမှာကြည့်နိုင် တယ် ။
Wheatgrass isafood prepared from the cotyledons of the common wheat plant, Triticum aestivum. It is sold either asajuice or powder concentrate. Wheatgrass differs from wheat malt in that it is served freeze-dried or fresh, while wheat malt is convectively dried. Wheatgrass is also allowed to grow longer than malt is. It provides chlorophyll, amino acids, minerals, vitamins, and enzymes. Claims about the health benefits of wheatgrass range from providing supplemental nutrition to having unique curative properties. Some consumers grow and juice wheatgrass in their homes. It is often available in juice bars, alone or in mixed fruit or vegetable drinks. It is also available in many health food stores as fresh produce, tablets, frozen juice and powder.
*2Cultivation
*3Indoor growing and mold
*4Usage
*5Health claims
o 5.1 Wheatgrass vs. common vegetables
o 5.2 Detoxification
Schnabel, an agricultural chemist, conducted his first experiments with young grasses in 1930, when he used fresh cut grass in an attempt to nurse dying hens back to health. The hens not only recovered, but they produced eggs atahigher rate than healthy hens. Encouraged by his results, he began drying and powdering grass for his family and neighbors to supplement their diets. The following year, Schnabel reproduced his experiment and achieved the same results. Hens consuming rations supplemented with grass doubled their egg production. Schnabel started promoting his discovery to gristmills, chemists and the food industry. Two large corporations, Quaker Oats and American Dairies Inc.[ambiguous], invested millions of dollars in further research, development, and production of grass products for animals and humans. By 1940, cans of Schnabel’s powdered grass were on sale in major drug stores throughout the United States and Canada.
Schnabel’s research was conducted with wheatgrass grown outdoors in Kansas. His wheatgrass required 200 days of slow growth, through the winter and early spring, when it was harvested at the jointing stage. It is at this stage that the plant reached its peak nutritional value; after jointing, concentrations of chlorophyll, protein, and vitamins decline sharply. Harvested grass was dehydrated and made into powders and tablets for human and animal consumption. Wheatgrass grown indoors in trays for ten days contains similar nutritional content. Wheatgrass grown outdoors is harvested, dehydrated atalow temperature and sold in tablet and powdered concentrates. Wheat grass juice powder (freshly squeezed with the water removed) is also available either spray-dried or freeze-dried.
 Indoor growing and mold
Growing wheat grass indoors usually requires the grass to be grown in small trays with the wheat grains close together forahigh yield. Not every wheat seed will sprout. Ungerminated seeds can develop mold which may spread to nearby sprouted plants. This may cause an unpalatable taste and, in extreme cases, an allergic reaction. This issue is not necessarilyaproblem when growing wheat inafield, due to less crowding of seeds and the resulting improved air circulation.
The average dosage taken by consumers of wheatgrass is 3.5 grams (powder or tablets). Some also haveafresh-squeezed 30 ml shot once daily or, for more therapeutic benefits,ahigher dose up to 2–4 oz (60 – 120 ml) taken 1-3 times per day on an empty stomach and before meals. For detoxification, some users may increase their intake to 3–4 times per day. Consumers withapoor diet may experience nausea on high dosages of wheatgrass.
Vitamin B12 0.30 mcg0mcg0mcg
Wheatgrass proponent Schnabel claimed in the 1940s that “fifteen pounds of wheatgrass is equal in overall nutritional value to 350 pounds of ordinary garden vegetables”,aratio of 1:23. Despite claims of vitamin and mineral content disproportional to other vegetables, the nutrient content of wheatgrass juice is roughly equivalent to that of common vegetables (see table 1).
အခုအချိ်န်မှာတော့ ဟိုဟာ ပျောက်တယ် .. နုပျိုတယ် .. ကြီးစေချင်တာ ကြီးမယ် .. ချပ်စေချင်တာ ချပ်မယ် ဆိုရင် လူတွေ လိုက်လုပ်ကြမှာပဲ .. အဲဒီ နည်းတွေ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းကောင်းဦးမှာပဲ .. အယ်လ်ဖာဖာ တုန်းကလဲ အယ်လ်ဖာဖာ .. ဂျင်ဆင်းတုန်းကလဲ ဂျင်ဆင်း .. အခုလဲ အယ်လ်ဖာဖာလို ကလိုရိုဖေးလ် များများပါတဲ့ ဂျုံမြက်နု ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပြန်ရော .. ဒါတွေနဲ့ပဲ မဆုံးသံသရာ ဖြစ်နေတာ ..
ဘိစပ်တုန်းကလဲ ဘိစပ်လေ မှတ်မိကြမှာပါ .. ပရိုမီနာ လိမ်းဆေးတုန်းကလဲ လိမ်းလိုက်ကြတာ .. တချို့များဆို မျက်နှာတွေ ယောင်တက်လာလိုက်တာ ဆေးခန်းကို ရောက်လို့ .. ပိန်ဆေးထိုးတာ ဆိုပြီး တစ်ယောက် လုပ်လိုက်တာ ဆေးခန်းမှာ လူတွေ တိုးမပေါက်အောင်ပဲ .. နောက်တော့ လူသေတယ် ဆိုမှ အရေးယူလိုက်မှ ပျောက်သွားတယ် ..
ကြီးကိုးကြီး .. ကြီးလေးကြီး ဆိုတုန်းကလဲ တက္ကဆီတွေ ကောင်းစားကြ ..
ပုဂံမှာ ဆိုရင်လဲ စွယ်တော် လေးဆူ မွန်းမတည့်ခင်ဖူး .. ဆိုတော့ ကူးတို့တွေ ကားတွေ အလုပ်ဖြစ် ..
မှန် မမှန် ဆိုတာ တစ်ဦးစီရဲ့ အတိတ်ကံတွေ လက်ရှိကံတွေ လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲသွားမှာ .. သူများကောင်းတိုင်း ကိုယ် ကောင်းချင်မှ ကောင်းမယ် .. ပင်နဆလင်တောင်မှ သူများ ကောင်းပေမယ့် ကိုယ် မတည့်တာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်တာ မဟုတ်လား .. ချင့်ချိန်ကြဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်
မိတ္တတူကူးပြီး ရုံးက မိတ်ဆွေတွေကို ဝေပေးလိုက်တယ်
မနို လည်းအိမ်မှာ စိုက်ပြီး သောက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်